Date: 02 août 2017 - 07:10
mamboly ko afaka hatao. Alefa tsikely2 raha tsy nandova tany be toa anay. Vidiana tsikely2 ny tany dia ampambolena olona misy contrat, mahazo kely ihany isantaona dia ampiana ndray iny ny tany, tsy tena rentable io manko raha latsaky ny 5 hectares. Regrouper-na @ teorana iray ny fambolena fa tsy oe ny 1 any bira ny iray any tsididy an. Afaka 5 taona ve tsy mba afaka manao ranch kely ny tenanay?
Par: Concepteur master
Manana idee afaka fakafakainareo :
Tsy dia mila budget be fa etudiena ny olona hiara hiasa
1- Web TV gasy pour Madagascar et Diaspora
Vola miditra : matraquage artiste + pub annonceur + nombre de vue Youtube
2- site e-commerce art malagasy
Vola miditra : vidin'ny asa tanana
Exemple : tableau vita gasy - sary sikotra - sns sns...
Hevitra : Mividy na miantoka ny asa tanan'ny artiste.
3- Vetements et accessoires pour enfant (Viser Madagascar ensuite l'international)
Lancement sur les réseaux sociaux + echange de lien site
4- Franchise de Gargottes/snack
Mitady points de vente am le trano mora ireny (ohatra 500.000 fmg/mois)
Dia atao betsabetsaka (2 ou 3 pour commencer) tout en sachant fa ny composé dia 100% bénéf.
Mbola omeko eto ny tohiny raha misy liana.
Date: 24 août 2017 - 09:28
sao de mba mahita mpandray na pividy hena omby sy akoho gasy nareo
Par: azafady oe
Date: 28 août 2017 - 10:59
N.n : otrinn kg hen'omby sy akoho gasy zany ? préciser-o oe nofony sns ...mci
Par: Adrienne I.R-AIR Connector
Date: 30 août 2017 - 23:07
Salama o. Afaka miara-miasa raha mazotoa iana
Date: 21 décembre 2017 - 22:12
Inona no technique ampiasainao @izany?Izaho koa mantsy ao anatin'io tontolo io.
Date: 24 décembre 2017 - 07:03
Miarahaba, tsara ity resaka ity!
Raha manana vola betsaka atao investissement dia ity.
Resaka fambolena fary miampy fanaovana collecte koa ary manangana orin'asa hamadiana izany ho éthanol atao ho angovo fandrahoana sakafo.
Ny fary lasa ataon'olona taoka gasy fotsiny manimba fiaraha-monina any ambanivohitra sy eto Madagasikara mihintsy.
Sady misy tombony eo amin'ny tontolo ihainana amin'izay satria mihena ny fampiasan'olona charbon izany hoe fanampahana hazo.
Fijery lavitra indray, aza adino koa fa ny éthanol anefa fa afaka atao fanampina lasantsy na solony mihintsy aza, ary any Brésil izao ohatra efa amidy eny amin'ny station service mihintsy ny éthanol.
Sady tsy manimba tontolo ihainana satria zéro na kely bilitika kely raha misy aza ny bilan carbone éthanol. Ka raha mijery lavitra aza ny vidin'ny solika io na tiana na tsy tiana tsy maintsy miakatra foana ary hoavy ny fotoana na tiana na tsy tiana lasa ny fampiasana éthanol no mora kokoa nohon'ny lasantsy.
Sady mitondra voka-tsoa maro be hoan'ny firenena izany
Voalohany Mamorona asa maro directe sy indirecte (hoan'ny mpamboly koa) ka hanova fiainan'olona maro
Faharoa hampihena ny fanafarana solika avy any ivelany, hampatanjaka ny vola ariary.
Hampihena ny mpisotro toaka gasy
Ny tenako manonkana izany raha manana vola dia io no ataoko, ary efa eo ampijerena ilay izy mihintsy aza. Ary hitako marché azo hidirana be io, ary fijery lavitra tsy maintsy ho lany ny pétrole ka anisan'ny vaha-olana io indrindra hoan'ny firenena toan'i Madagasikara izay mbola tsy hahavidy fiara-électrique mihintsy ny olona, ny delestage koa tsy manamora ny fananana an'izany na misy aza ny vola.
Date: 24 décembre 2017 - 07:21
Adinoko fa ny mangahazo koa afaka avadika éthanol fa saingy ny olana tsy dia azahoana betsaka nohon'ny fary.
Date: 30 décembre 2017 - 16:41
Miompy akoho dia afaka atao soamantsara satria:
- misy ny demande
- tsy mila vola be fa miainga @ kely ary afaka hitarina tsikelikely
- tany malalaka ary ny vaksiny @ aretina barika misy
- provandy misy na ambintsakafo
- Afaka amidy ny nofon'akoho, atody,na akoho velona mihitsy
- Afaka manokatra gargotte momba ny akoho fotsiny
- akoho lahy sy vavy
- fotoana, tany, faharetana
- vaksiny sy dokoterambiby
Izaho dia mahafantatra olona mivelona @ akoho fotsiny. Manana gargotte kely zareo ary betsaka ny offres ataony. Manao resto kely.